Richard Stallman anosiya basa kuMIT uye FSF | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi nhau dzinoshamisa kwazvo dzabuda uye ndizvozvo Richard Stallman akasiya chigaro kubva pane yake post kuMIT uye zvakare kubva kuFSF (Mahara Software Siseko). Nhau idzi dzakaunzwa neiyo Techcrunch svikiro uye zvinoita sekunge chaive chisarudzo chaStallman pachake nekuda kwekufungidzirwa kumanikidzwa kwaaitambira nekuda kwekumwe kusanzwisisana, sekutaura kwababa vemahara software.
Richard Stallman akabata chinzvimbo kuMIT CSAIL (Computer Science uye Artificial Intelligence Lab) uye kubhodhi revatungamiriri ve Yemahara Software Foundation sezvo yakavambwa muna 1985. Zvakanaka, ikozvino anomisa chiitiko chake paMIT uye zvakare anorega kuve mutungamiriri weFSF. Chinhu chinoratidzika kunge chisina kujairika asi icho chine tsananguro, kunyangwe mune yemahara software midhiya isu tanga tisingazive kune zvimwe zvinhu zvaiitika ...
Izvo zvese zvinobva kune MIT akapedza kudzidza akaburitsa chinyorwa paMedium svondo rapfuura pasi pemusoro wenyaya "Bvisa Richard Stallman«. Mune chinyorwa ichocho, akadzokorora email kubva kuna Stallman pachake achitaura nezvenyaya yaMarvin Minsky, purofesa weMIT akapomerwa mhosva yekushungurudza vanhukadzi. Anonzi akabatwa akati akamanikidzwa kurara nemupurofesa pakomboni yeEpstein. Uye zvakare, netiweki yevana vadiki yakashanda ipapo uye akatongerwa izvozvo.
Izvi chokwadi chine mhosva chaizvo nemudzidzisi. Asi ini ndoda kujekesa kuti Richard Stallman haana kupomerwa kana kutongwa chero chinhu (hapana nyonganiso), nekuti zvaakaita ndezvekutaura nezvenyaya iyi kuburikidza nepositi sezvandatotaura kare. Asi matauriro ake akashandiswa achimupomera. Stallman akati «izwi rekuti 'kushungurudzwa pabonde' harina kujeka uye rinotsvedza»Uye kuti akabatwa«akauya kuMinsky akagadzirira chose«. Kune izvi zvinowedzerwa kuti MIT yakagamuchira mari kubva kuna Epstein nemari inoita kunge inodarika zvavakabvuma pachena. Musoro weMIT naStallman pachavo vafunga kusiya chigaro nekuda kwezvikonzero izvi.
Richard akataura kuti nemazwi ake pakave ne «nhevedzano yekusanzwisisana uye kusanzwisisika«, Asi nekuda kwekumanikidzwa akapedzisira aregera basa. Ini ndinofunga ndicho chisarudzo chakanakisa kana chikanganiso chaitwa, chikuru kana chidiki, kutsauka padivi kuti zvisakuvadza mapurojekiti. Vamwe vanoedza kubatirira pazvinzvimbo zvavo kunyangwe zvese uye izvo zvinopedzisira zvagadzira dambudziko hombe ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Richard Stallman anosiya chigaro kubva kuMIT neFSF
Kune avo vasinganzwisise zvakaitika chaizvo:
Mumwe mukadzi anobva kuMIT akatora maemail emukati umo Stallman akapa maonero ake nezve chiitiko uye akachiisa pamasocial network kushora Stallman nezvaakataura.
Musikana uyu anoti Epstein akamukumbira kuti aite bonde nenhengo yeMIT uyo akashaya muna 2016.
Stallman akauya achizvidzivirira nekutaura kuti waaishanda naye kuMIT aisazomborara nemusikana achiziva kuti akamanikidzwa.
Chapupu chaivapo chinoti musikana uyu akauya asi iye waanoshanda naye kuMIT akamuramba, saka zvinoita sekunge Stallman anga asina kurasika zvakadaro.
Asi zvakafanana, iyo hasha yakatsamwa yatokumbira musoro wayo uye inofanira kuumburuka.
Uyezve pane chimwe chinhu kunze uko chakataurwa naStallman muna 2003 (makore gumi nematanhatu apfuura!)
Mairi inoti 2 poindi:
1- Kuti mumaonero ake munhu anga akagadzirira kuita bonde kubva paakasvika pakukura kwake pabonde (verenga kubva pagumi nemana zvichienda mberi - mushure mekuyaruka)
2- Kuti mumaonero ake hapana chakaipa kuti munhu wezera rekurara naye uye ari mwana ari pabonde nemvumo yake nemunhu mukuru.
(post-pubertal mudiki 14 kana kupfuura)
Zvino, mwedzi mishoma yapfuura gore rino, akanyora chinyorwa umo maakagadzirisa zvaaifunga makore apfuura
Mune iyo yaanoti mushure mekukurukurirana, akaona kuti hazvisi zvemuviri chete asiwo zvepfungwa uye kuti mwana anorara nemunhu mukuru
Izvo hazvina kunaka nekuda kwekukuvara kwepfungwa kwainogona kukonzera kune vadiki.
Hapana nyaya yaanotsigira pedophilia (verenga kusangana kwepabonde, ndiko kuti, pasi pegumi nemana).
Asi zvakare imwe nguva gare gare ndakaruramisa ndikati hazvina kunaka kumwana mudiki (verenga pasi pemakore gumi nemasere kana chero chinhu) kurara nemunhu mukuru pasi pemamiriro ezvinhu chero api zvawo (kunyangwe paine mvumo kubva kumudiki).
Uye kutaura kwake maonero anoenderana chete nezvaanofunga zvine musoro, kana iwe ukamupa nharo inonzwisisika inoratidza kuti ari kukanganisa, zviri nyore
gamuchira chikanganiso chako uye voila.
Heano mamwe maviri misoro:
1- Akanyora kururamisa mwedzi yakati wandei yapfuura, saka haana KUZVIITIRA kuti azvidzivirire, asi akazvinyora sekuratidzira kwake.
2- Imhosva here kutaura zvaunofunga? Ndiri kureva, Stallman haana kupomerwa mhosva yekuita bhurugwa kana kushungurudzwa kana chero chinhu chakadai, anongopomedzerwa kunyora zvaanonyora.
Zvinoshamisa kuti munhu anofanirwa kutsanangura zviri pachena mazuva ano,
Vanhu vanofungidzira zvinhu zvisina kwazvinogona uye mapepanhau anongodzokorora kuti vanyengere mumwe munhu pachena.
Ndozvinoita senge zvinotyisa kwandiri.
Ndatenda zvikuru neruzivo. Ndakanga ndisingazvizive. Ini ndichave ndichidzokororazve chinyorwa neruzivo rwese rwandiri kuunganidza.
Kutenda neruzivo zvakare, ikozvino ndave nekwaniso yekujekesa zano rechimwe chinhu chandakanga ndisingazive zvachose. Ndinovimba ichi chinyorwa chinojekesa zvese:
Hiko seijuro akadaro
Zviri pachena kuti handisi ini ndoga ndinodzivirira Stallman, zvinoitika ndezvekuti chinzvimbo chakanyanya nhasi "Feminazi" inotsvaga chero divi kurwisa chirevo chinoonekwa senge chichienderana kana chisina kujairika uye chinotyora zano rake re "Dziviriro kukodzero dzavo" izvo inoenda kubva kuzvidziviriro kurwisa kusingasarudze, kuudzwa zvisizvo uye kushayikwa mukusasarura.
Panyaya iyi, munhu anotambura nekurwiswa ndiStallman nekuda kwemafungiro ari ega uye kwaasingatsigire kubiridzirwa kwevanhukadzi kana zvekubhinya chero nguva. Zvinosuruvarisa kuti kune vanhu vakaita semudzidzi iyeye vanongotsvaga kota yeawa yemukurumbira pamambure, vanokuvadza mumwe munhu agara achitsvaga kudzivirira rusununguko rwevanhu nenzira yavo.
Zvinondirwadza zvechokwadi kuona kuti vazhinji vemunharaunda yeLinux nemapoka eboka vakakandawo mheni kuStallman vasingazeze uye vasina kutanga kuverenga zvinyorwa senge izvo zvawakagovana.
Ndinovimba iyi posvo yakapararira munharaunda dzese dzeGNU / Linux uye vanomira kuve vanonakidza, vasina musoro uye vasina tsvete.
Pindura Hiko Seijuro